Isikhathi sehlobo: isikhwama esibomvu noma isikhwama esiluhlaza okwesibhakabhaka? - Isikhumba se-Italian Pisa Pelle Pelle
Lapho ekugcineni isimo sezulu esifudumele sifika futhi izinsuku ziba zinde, imibala emnyama iyaphela, ishiya isikhala samathoni akhanyayo, anempilo, athweswe amandla. Kuzoba yintokozo yokudonsa izindilinga ezimibalabala, amashidi anemibala kanye nemiklamo ye-ethno-chic kusuka endaweni yakho yokulala. Ngabe umbala wakho wezikhwama zonyaka omusha uzoba namuphi umbala?
Imincane, enkulu, ihlombe, i-crossbody, icompact, imigqa ethambile, izinhlwayi zalesi sikhathi zonyaka ziphuma ngamafasitela, zikhona ngamamodeli amaningi ahlukahlukene. Kepha uma kukhulunywa ngezesekeli okufanele zigqokwe, umbala ukhiye ekwakheni izembatho ezinhle zawo wonke amathuba. Kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo, ukusuka kumbala we-pastel kuya kumathoni we-fluorescent, ukusuka kumbala oqinile kuya emaphepheni akhetheke kakhulu.
Okubomvu nokuhlaza okwesibhakabhaka yimibala enesilinganiso esimangazayo se-nuance kwiphalethi labo. Yomibili le mibala, ngemithunzi ehlukene, igqugquzela umuzwa we-adventure nenkululeko, futhi ikumema ukuthi ugubhe ukufika kwentwasahlobo nehlobo ngomfutho owengeziwe wamandla.
Imibala ingasho okuningi ngobuntu bomuntu. Imvamisa ngowesifazane okhetha umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ulinganise ngokuphelele, uyazi kakhulu ngobuntu bakhe: labo abavame ukukhetha izingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka nezinesekeli bathembekile, bangaze bacasuke, bacabange futhi bahluke kakhulu. Owesifazane okhetha izithunzi ezibomvu unothando, unobuhlakani futhi unolwelwe: umi ngomqondo oqinile, umlingiswa nomoya wokuzimisela.
Ngokwenza ngokwezifiso izingubo zakho ngezesekeli ngemibala ebomvu noma eluhlaza okwesibhakabhaka, uthumela umyalezo ocacile emhlabeni okuzungezile. Ungaxhumana namandla akho nesimo sakho somqondo ngokukhetha umbala okufanela kahle. Ungacabanga ngemibala egqamile, egqamile: isibonelo ngesikhwama sikagesi esiluhlaza okwesibhakabhaka noma esikhanyayo esibomvu, uzogqama esixukwini futhi nakanjani ngeke unganakwa.
Olubomvu umbala wobuthakathaka, isikhwama esibomvu esihle uzokukwenza uzizwe njengenkanyezi engaphikiswa kusihlwa phakathi kwabangane. Umbala ngokwawo udlulisela amandla amahle futhi ukufanisa wona akukho okufushane okulula. Ubomvu obunamandla buyakwazi ukugqekisa noma yiziphi izithunzi ezingathathi hlangothi, bese ziqhuma ngokuqhathanisa okufana nobumnyama noma obumhlophe. Ezimfashini zezitayela ezingama-50s ezinamachashaza amhlophe namnyama e-polka, i-red clutch yimininingwane engenza umehluko. Ebusuku ngaphandle e-disco noma emcimbini, esikhwameni sakho esibomvu sizokwenza isembatho sakho silula kodwa sibe yinhle. Isikhwama esibomvu sesikhumba siyakwazi ukudlulisa ukuthambekela kanye nesitayela, ngisho nokusihlanganisa ne-pair elula ye-jean.
Okuluhlaza okwesibhakabhaka umbala olula kakhulu ukufanisa; kufaka umuzwa wokujula, ubuhle kanye nokulinganisela okuhle. Ungabhangqa isikhwama esiluhlaza okwesibhakabhaka ngemithunzi eluhlaza, ophuzi, omhlophe, ompunga, onsundu nesikhumba nabanye abaningi. Oluhlaza okwesibhakabhaka uluphutha olunamandla, futhi kungenye embalwa evumela ukufana kwe-tonal. Isikhwama esiluhlaza okwesibhakabhaka sihle kakhulu, noma sihamba nebhulukwe lezemidlalo. Sebenzisa eyodwa ngomklamo wezimbali noma wezitshalo ezishisayo, ogcwalisa ingubo yakho ngokungafanele. Isikhwama esiluhlaza okwesibhakabhaka silungile uma ufuna umlingani ngaso sonke isikhathi, ukusuka kokuhlelekile kakhulu ukuya kokungahlelekile kakhulu. Ukuhambahamba emigwaqweni yedolobha ebusuku, kuzokwengeza umoya opholile ezingutsheni zakho.